တ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
တကယ်ဆိုရင်။ ရေး - အရိုး၊ ဆို - ချစ်သုဝေ။
တကိုယ်ကောင်းဆန်လိုက်သည်။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
တစိမ့်စိမ့်ကြည့်။ ရေး - မင်းချစ်သူ၊ ဆို - ဖိုးကာ။
တပင်ရွှေထီး။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
တီးပါသီ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
တို့ဘ၀သစ်နေ့။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - ဟန်ထွန်း။ စီးရီး - ရှိနေမယ်။
တို့အတူ။ ရေး - နောနော်။ ဆို - Wanted စီးရီး - ဘာလာလာ။
တေဇသုနေမ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
တေးသီတဲ့ငှက်။ ရေး/ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
တွေ့ဆုံချိန်။ ရေး - အယ်လ်ဒီ။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
တောဂေါ်လီ။ ရေး/ဆို - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်။ စီးရီး - Happy SAI SAI Birthday
တော်ပါပြီ သွား ...။ ရေး - Elde ။ ဆို - အဲလက်စ်။ စီးရီး - စိတ်ကူးသက်သက်များ။
တောင်သူပျို။ ရေး - နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်။ ဆို - မကြည်အောင်။
တောင်းပန်တယ်။ ရေး - Galal' ။ ဆို - အာတီချုပ်။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
တစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ရေး/ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
တစ္ဆေ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
တစ္ဆေတစ်ကောင်ရဲ့ည။ ရေး - အယ်ဖြူ။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - ကမ္ဘာသစ်တေး။
တစ်နေ့စာအလွဲများ။ ရေး - အယ်ဖြူ။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
တစ်နေ့တာ။ ရေး - တင်ထွန်းအောင်။ ဆို - BIG BAG ။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
တစ်ယောက်တည်း။ ရေး - ရဲရဲ။ ဆို - R ဇာနည်။ စီးရီး - ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူ။
တစ်သက်သာအမှတ်တရ။ ရေး - ဘိုဘို။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
တိတ်တိတ်ကလေးပဲ ချစ်သွားမယ်။ ရေး - ၀ိုင်ဝိုင်း၊ R ခိုင်။ ဆို - L ဆိုင်းဇီ။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
တိတ်တိတ်နေ။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - PUNK အကြောင်းမပြောနဲ့။
တိတ်တိတ်လေးကြေကွဲ။ ရေး - မင်းချစ်သူ။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
တမ်းတ။ ရေး - အငဲ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
တိမ်တိုက်လေးပြောပေးပါ။ ရေး - ရဲဝင့်ထူး။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
တယ်လီဖုန်း။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။